Dowladda Jarmalka: Jidka Garoowe-Gaalkacyo waa fashilmay waana la noqonay lacagtii mashruuca – Radio Daljir
Seteembar 8, 2018 1:59 b 0
War saxaafadeed ku qornaa afka Ingiriiska oo ka soo baxay Safaaradda (Hawlgalka) Jarmalka ee Soomaaliya, Kenya iyo Seychelles ayaa war aan hore looga baran gayiga Puntland faafisay maalinkii Khamiista ee 6 Siteenbar 2018.
War saxaafadeedka oo dabajooga fashilka ku yimid dayactirka jidka Garoowe-Gaalkacyo oo kamid ah hawbowlayaasha dhaqaale ee Puntland ayaa lagu macneeyey sababta ay Dowladda Jarmalku kala noqotay lacagtii lagu dhammaystiri lahaa dayactirka jidkaas burburey ee u dhexeeya Garoowe iyo Gaalkacyo.
War saxaafadeeedka ayaa ku biloowday in “Jarmalku uu safka hore uga jiro saxiibada Soomaaliya ka kalkaala dhanka hormarka. Qayb lixaad leh oo kalkaas kamid ahna waxaa loo fidiyaa Dowladda Puntland. Iskaashiga Hormarinta ee Jarmalka ayaa Puntland ka saacida xoojinta laamaha caafimaadka, gurmadka abaaraha iyo waliba dhanka machadyada tababarka farsamada gacanta. Caawimada dowladda Jarmalka ee Puntland, tusaale ahaan, dhanka qaybaha caafimaadka oo kaliya waxa ay ka badantahay $30 milyan USD.”
War saxaafadeedka oo u daadagaya dulucda qoraalka ayaa u gudbay in caawimada Jarmalku ee Soomaaliya ay soo marto hay’adda dowliga ah ee GIZ.
GIZ waa hay’ad hormarin oo ay leedahay dowladda Jarmalku, masuulna ka ah dib-u-dhiska qaybta jidka Jalam-Xarfo ee mashruuca Garoowe-Gaalkacyo, dhanka talooyinka farsamada iyo dhanka miisaaniyadda mashruucaba. Fulinta mashruuca waxa uu ku qoondeysaa Abril 2017 illaa iyo May 2018.
Maxaa fashiliyey mashruuca?
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in “biloowgii mashruuca sannadkii 2016 aad loogu rajaweynaa in guul laga gaari doono, laakiin qaybihii Puntland ee isku bahaysatay fulinta mashruuca ayaa waxaa ka dhex dillaacay khilaaf in uu sii xumaado ma ahee xal loo waayey. Sidaas darteed khilaafka mashruuca ragaadiyey waxa uu keenay in la waayo daahfurnaantii iyo xisaabtankii muhiimka u ahaa fulinta mashruuca ayada oo ayba socoto shaqadii dhismaha waddadu.”
War saxaafadeedka Dowladda Jarmalka ayaa lagu sheegay in ay ka murugoonayaan natiijada go’aanku uu ku yeelan doono hormarka dhaqaalaha Puntland. “Waan ognahay muhiimadda jidka Garoowe-Gaalkacyo uu u leeyahay dhaqaalaha dalka iyo kan gobolka oo dhan. Laakiin, haddii aan nahay saaxiibadiinii caalamka marnaba kuma takrifali karno tayada fulinta mashruuca, dhan daahfurnaan iyo dhanka xisaabcelinta deeqaha deeq-bixiyayaasha.”
Jarmalku eed ma leh
War saxaafadeedka ayaa ka digay beenabuurka iyo kutirikuteenta suuqa lala dhexmarayo laguna eedeynayo in GIZ ay masuul ka tahay foolxumada dhacday. “Waa diidnay dhammaan sheegashooyinka ah in lacagtii loo qoondeeyey mashruuca aan la bixin. Lacag bixin kasta waxa ay lahayd nidaam lagu bixiyo, waana la bixiyey dhammaan lacagihii shaqadooda la qabtay. Saas oo ay tahay, nasiibdarro, intii heshiisku socday mashruuca waxaa la fuliyey 14% oo kaliya loona fuliyey nidaamkii lagu heshiiyey iyo tayadii la filayey. Sidaas darteed, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan daneeyayaasha mashruuca in ay ka fogaadaan eedeymaha dhaawici kara iskaashiga ka dhexeeya Puntland iyo saaxiibadooda dibadda ee ay iskaashadaan.”
War saxaafadeedka ayaa lagu soo gabagabeeyey in Jarmalku uu “garabtaaganyahay hormarka dhaqaale ee guud ahaan Soomaaliya iyo Puntland gaar ahaan. Saas oo ay tahayna, qoondadii dhaqaale ee mashruuca la laalay sababna u ahayd joojinta iskaashigii ka dhexeeyey GIZ iyo Hay’adda Jidadka Puntland (PHA), qayb kamid ah qoondadaas weli waa la heli karaa, loona wareejin karaa oo loo isticmaali karaa waxqabad kale. Si guud, Safaaradda Jarmalku waxa ay ayidaysaa in go’aankan uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin mashaariicda kale ee Jarmalku ka wado Puntland. Dowladda Jarmalku waxa ay ku rajo weyntahay in ay sii waddo oo taabbagaliso iskaashiga wacan ee ay la leedahay saaxiibadeeda deegaanada si loo gaaro natiijo waarta oo dadka Puntland iyo inta ka baxsanba ka faa’iidaan.”
War saxaafadeedka Dowladda Jarmalka oo ku qoran afka Ingriiska hoos riix:
Siyaasadda & Dhaqaalaha 482 Wararka 21441